Ahoana no ahafantarako raha voasakana tamin'ny WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
WhatsApp no ​​fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran'izao tontolo izao ary na eo aza ny fisian'ny fampiharana hafa, mbola tsara lavitra noho ilay an'ny Facebook aza, dia nahavita nijanona ho mpilalao natanjaka indrindra teo amin'ny tsena. Rehefa nandeha ny fotoana dia efa nilaza zavatra maro momba an'ity fampiharana fandefasan-kafatra ity izahay, saingy anio dia hasehoko anao mihoatra ny hafetsena mahaliana.
Ity fikafika ity dia misy ifandraisany amin'ireo sakana azontsika amin'ireo mpampiasa hafa, ary tsy iza fa ny an'ny ahoana no hahafantarako raha voasakana tamin'ny WhatsApp aho. Raha miahiahy ianao na matahotra azy dia zahao amin'ny iray amin'ireo fomba hatolotray, eny, tokony ho fantatrao fa tsy azo atokisana 100% izy ireo.
1 Datin'ny fifandraisana farany
2 Asao izy ho any amin'ny vondrona iray
3 Sarin'ny mombamomba
4 Tsy voaray ny hafatra
5 Miezaha hiantso azy
6 Raiso ny Telegram
7 Mampiasà kaonty WhatsApp hafa
Datin'ny fifandraisana farany
Ny iray amin'ireo zavatra voalohany jerena dia ny datin'ny fifandraisana farany, izay raha toa ka nosakanany izahay dia tsy ho hitanay. Eo ambanin'ny anaran'ny olona tsirairay avy dia tokony hiseho ny daty sy ny ora anaovana ny fifandraisana farany. Raha tena antitra na tsy miseho io daty io dia mety hoe nanakana antsika io olona io.
Mampalahelo fa io fika io dia tena nitombina hatramin'ny vao haingana, fa izao kosa misy mpampiasa tsy afaka mampiseho ny datin'ny fifandraisana farany, ary noho izany avelao io fomba fanamarinana io raha toa ka nanakana anay tao amin'ny WhatsApp izy ireo.
Asao izy ho any amin'ny vondrona iray
Vitsy ny olona mahalala an'ity fika ity ary misy ny famoronana vondrona na ny fampiasana ny iray amin'ireo fampiasantsika azonay anasana ilay fifandraisana izay ananantsika fisalasalana momba ny fanakanana anay. Raha afaka mampiditra azy tsy misy olana isika dia hidika izany fa tsy nanakana antsika izy ary raha mampiseho hafatra diso isika dia ho nanakana antsika izany.
Ny hafatra manokana izay miseho raha toa ka nanakana antsika izany olona izany dia ireto manaraka ireto; "Hadisoana amin'ny fampidirana mpandray anjara ", ary avy eo dia holazainy amintsika fa" Tsy manana alalana hampidirina amin'ity fifandraisana ity ianao ".
Famantarana tsara hahafantarana raha voasakana tao amin'ny WhatsApp izahay dia ny mijery ny sary. Misy ireo mpampiasa izay matetika tsy miova sary matetika, fa Raha toa ka efa ela no nijerena ilay sary mombamomba azy na tsia fotsiny dia mety ho fambara mazava fa nanakana anay ny fifandraisana.
Tsy voaray ny hafatra
Tetika iray hafa azonao ampiasaina hizaha raha nisy fifandraisana iray nanakana anao ny manamarina raha nahazo ireo hafatra nalefanay azy ireo izy ireo. Isaky ny mandefa hafatra ianao dia misy marika fanamafisana roa tokony ho fantatra fa efa nalefa ilay hafatra ary koa ny fifandraisana hafa dia nahazo azy. Raha manga manga ihany koa ireo marika roa ireo, midika izany fa efa namaky ilay hafatra ianao.
Raha sanatria ka misy fisavana fotsiny dia midika izany fa nandefa ny hafatra ireo mpizara WhatsApp, fa ny fifandraisana izay nandefasanay azy dia tsy nahazo azy, satria mety tamin'io fotoana io tsy nisy fifandraisana tamin'ny tamba-jotra na noho izy nanakana antsika. Mampalahelo fa ity fomba ity dia tsy mety diso, fa afaka manampy be antsika izy io.
Miezaha hiantso azy
Nisy fiantsoana feo efa ela tao amin'ny WhatsApp. Fomba iray hahafantarana raha nisy fifandraisana manokana nanakana anay ny fiezahana hiantso azy ireo, na dia tsy fomba tsy lavorary aza ny sisa amin'ny tranga misy, ohatra, mety ho hitanao fa tsy misy fandrakofana ianao amin'izany fotoana izany.
Raha miantso iray na maromaro ianao ary tsy misy avelan'izy ireo, dia nanakana anao izany fifandraisana izany tsy isalasalana.
Raiso ny Telegram
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mazàna manana rindranasan-kafatra fandefasana hafatra eo noho eo napetraka amin'ny finday na dia matetika aza dia mampiasa WhatsApp foana izahay. Ampiasao telegrama Mety ho fomba tsara iray hahafantarana raha nisy fifandraisana iray nanakana anao tao amin'ny WhatsApp, ary azo inoana kokoa fa tsy nanakana anao tamina fampiharana roa izy ireo, indrindra raha vao teo amin'ny faharoa ianao.
Raha ohatra ka mahita azy an-tserasera sy mahita ny mombamomba azy rehetra ianao, ohatra, dia tsy isalasalana fa nanakana anao tao amin'ny WhatsApp izy. Raha tsy hitanao koa ny mombamomba azy na ny fotoana ifandraisany farany dia mety ho marani-tsaina noho ny nieritreretanao azy izy ary nanakana anao tsy ho ao anaty rindranasa rehetra.
Mampiasà kaonty WhatsApp hafa
Raha tsy nisy ny tetika rehetra nasehonay anao nanampy anao hahafantatra raha nanakana anao tao amin'ny WhatsApp ny fifandraisana iray, dia ianao irery mampiasa kaonty hafa momba ny fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo, izay mbola tsy voasakana ihany koa.
Raha toa ka afaka manomboka resaka amin'ity mpampiasa ity ity kaonty WhatsApp hafa ity, mitandrina ny datin'ny fifandraisana farany na mijery ny sarin'ny piraofilina, dia azonao atao ny manamarina fa voasakana ianao na manohy mitazona fifandraisana tsara amin'ilay olona ao aminao fanontaniana.
Ireo rehetra ireo dia sasany amin'ireo fomba azontsika ampiasaina hanamarinana raha misy fifandraisana WhatsApp iray nanakana anay tsy hahafahantsika mifandray amin'izy ireo. Mampalahelo fa rehefa averimberinay hatrany dia tsy misy diso diso izy ireo, koa tandremo tsara ny fomba fampiasanao azy ireo ary indrindra raha hiteny zavatra amin'io fifandraisana io ianao izay toa nanakana anao.
Manantena aho fa ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo, amin'ny iray amin'ireo fanavaozam-baovao manaraka, dia hanamora kokoa ho anay sy haneho amintsika izany vaovao izany mba tsy mila manao fanamarinana sy fiheverana izahay.
Nahita ve ianao raha nisy olona nanakana anao tao amin'ny WhatsApp?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay. Lazao ihany koa izahay hoe inona ny tetika hafa ampiasainao hahafantaranao raha misy fifandraisana iray nanakana anao amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran-tany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ahoana no hahalalana raha voasakana tamin'ny WhatsApp aho
Mode Martínez Palenzuela SAbino dia hoy izy:
Ary iza no miraharaha?
Mamaly an'i Mode Martínez Palenzuela SAbino
Hisy olona heveriko fa eny 😉
Amazon Chime, ny solon'ny Skype sy Hangouts ho an'ny orinasa, dia azo alaina izao